Calaamadaha Saxarada - SmartMe
Tag archives: caloosha
Dom » Gelitaannada lagu calaamadiyey "balaastiig"
Sony horay ayey u xaqiijisay - dhibaatooyin aad u weyn oo ku saabsan helitaanka PS5
Waxa daabacay	Sebastian K.
In kasta oo qunsuliyadda jiilka cusub ay ka muuqatay suuqa in ka badan lix bilood ka hor, haddana helitaankiisa weli wax badan baa loo baahan yahay. Dadka doonaya inay isku qalabeeyaan alaabtii ugu dambeysay ee Sony, PlayStation 5 ...
PlayStation 5 oo leh qiimayaal cusub oo sareeya! Nasiib darrose, ma hayno war wanaagsan
Kordhinta qiimaha PlayStation 5 consoles'ka ayaa durbaba bilaabmay. Nooca wadista iyo kaxeynta wadista ayaa koray PLN 100. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay, kororku wuxuu ku soo beegmay iyadoo ay yaraadeen helitaanka qalabka wax lagu iibiyo ee Poland. Qiimaha ...
Innaga Us sanadkan wuxuu ku dhufan doonaa PlayStation
dhexdeenna, Playstation, Playstation 4, Playstation 5, Sony
Waa inaan qiraa in dadka ugu caansan dhexdeenna ay ficil ahaan naga dambeeyaan. Iyadoo ay taasi jirto, horumariyayaashu waxay weli isku dayayaan inay ku dhiirrigeliyaan ciyaartoyda inay ku noqdaan cinwaankooda iyagoo cusbooneysiinaya cusbooneysiin cusub. Dhexdeennii ayaa ku soo laabtay! Intii lagu guda jiray Xaaladda shalay ee ...
PlayStation 5 waa la iibinayaa! Media Markt wuxuu bixiyaa noocyo aad u xiiso badan
console, mediamarkt, Playstation, Playstation 5, Ciyaar, Sony
Qalabka kombiyuutarka ee PlayStation 5 ayaa dib loogu soo iibiyay qaybta Digital-ka iyo nooca leh 4k Ultra HD akhristaha Blu-ray. Media Markt waxay soo bandhigtay seddex qaybood, kuwaas oo, marka laga reebo qunsulka, sidoo kale ay ku jiraan ciyaaro iyo waxyaabo kale oo dheeri ah ...
PlayStation 5 oo ku soo laabtay Allegro. Eeg qiimaha xirmooyinka!
allaro, Playstation, Playstation 5
Fursad kale oo lagu iibsado qalabka 'PlayStation 5 console'! Haddii aadan wali iibsan qunsulka riyadaada, waa tan fursad kale. Qalabka ayaa horeyba uga soo muuqday mowjado waagii hore Media Expert, Amazon, ...
Qalab cusub oo teknolojiyad ah oo ay kuxirayaan ilaaliyayaasha VR
Playstation, playstation vr
Bishii la soo dhaafay, Sony waxay si rasmi ah u shaacisay inay bilowday inay ka shaqeyso jiil cusub oo ka mid ah muraayadaha indhaha ee loo yaqaan 'VR', oo ay weheliyaan PlayStation 5, inay damaanad qaadayaan khibrad lama ilaawaan ah. Xaqiiqda dhabta ah ee PlayStation waa sidaas in gebi ahaanba la galo ...
PlayStation 5 waa qalabka lagu iibiyo. Tanina walo ay jirto gabaabsi kujiray bakhaarada!
Sida laga soo xigtay xogta afartii bilood ee la soo dhaafay, waxaa la xisaabiyay in iibinta PlayStation 5 ay abuurtay faa iidadii ugu badneyd ee Mareykanka ee taariikhda muddo gaaban. PS5 waxay lumisaa kaliya tirada unugyada lagu iibiyo Nintendo Switch. Playstation 5 waa lumineysaa ...
Sony waxay oggolaatay ballaarinta xusuusta PlayStation 5
27 Febraayo 2021
Horudhaca jiilka cusub ee qunsuliyadaha ayaa dhacay seddex bilood ka hor. Waqtigaan la joogo, si kastaba ha noqotee, helitaankoodu waa mid aad u xaddidan, sidaa darteed way adag tahay in laga faalloodo caannimadooda. Waxaan dhawaan ogaanay in ...
Waa hubaal - ciyaaro badan oo PlayStation ah ayaa ku dhici doona PC
24 Febraayo 2021
gry, pc, Playstation
Wax aan sugaynay ayaa dhacay - ciyaaro badan oo hore oo kaliya laga heli jiray PlayStation ayaa imaan doona PC! Ciyaaraha PlayStation ayaa ugu dambeyntii ku dhacay PC! Wareysi ayaa goor dhow la daabacay ...
Neonet waxay ku siisaa qiimo weyn qunsulka PS5. Set cajiib ah!
neonet, Playstation, Playstation 5, dallacsiinta
Qalabka Playstation 5 waxaa mar kale laga heli karaa dukaanka Neonet. Silsiladdu waxay xirtay hal xirmo oo PS5 ah oo iib ah, laakiin qiimo aad u wanaagsan. Marka lagu daro qunsulka laftiisa, dejinta sidoo kale waxaa ku jira laba kulan. PS5 qiimo weyn ...